The Ab Presents Nepal » बेरोजगारलाई यसैवर्ष ३० दिनको रोजगारी ‘ग्यारेन्टी!
बेरोजगारलाई यसैवर्ष ३० दिनको रोजगारी ‘ग्यारेन्टी!
१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि एकैपटक स्थानीय तहमा दुई अर्ब ३६ करोड ससर्त अनुदान पठाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पठाएको यो अनुदानबाट स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा बेरोजारका रुपमा दर्ता भएका युवालाई न्युनतम् १ महिनाको रोजगारी दिनुपर्नेछ ।
यो वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वनय समयमै गर्न नसक्दा न्यनतम् सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था भएको छ । यसैका कारण यो वर्ष अबको दुई महिनाभित्रै सरकारले बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत युवालाई न्यनतम् ३० दिनको रोजगारी दिने गरी रकम निकासा गरेको हो ।
डोजरलगायतका ‘हेभी इक्वीपमेन्ट’ प्रयोग गरिने आयोजनामा भने यो रकम खर्चिन पाइने छैन । स्थानीय क्षेत्रमा युवालाई रोजगारी दिने गरी यो अनुदानको उपयोग गर्नुपर्नेछ ।एउटा आयोजनामा खर्च हुने रकमको ७० प्रतिशत रकम ज्यालाबापत युवालाई भुक्तानी गर्न सकिने छ । स्थानीय तहले आफ्ना स्वीकृत कार्यक्रममध्येबाट ५ लाखसम्मका साना आयोजनामा युवा परिचालन गर्न सक्नेछन् ।
कुन स्थानीय तहमा कति अनुदान ?